ओलीले उपेन्द्र यादवलाई किन सरकारमा सहभागी गराए ? - Himalayan Kangaroo
ओलीले उपेन्द्र यादवलाई किन सरकारमा सहभागी गराए ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २० जेष्ठ २०७५, आईतवार ०२:१४ |
काठमाडौं । अरु मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधन माग्दै गर्दा उपेन्द्र यादव त्यसले नपुग्ने, पुर्नलेखन नगरी पछि नहट्ने चर्को अडानमा थिए ।
तीन बर्षअघिको तेस्रो मधेस आन्दोलनदेखि गत बर्षका तीन चरणका चुनावसम्मै उनले आफ्नो त्यही अडान एकनास दोहोर्याईरहे । तिनै नेता यादव संविधान संशोधनको मोटो सैद्धान्तिक सहमतिका भरमा सात बर्षको प्रतिपक्षी कित्ता बदल्दै सत्ता राजनीतिमा फर्केका छन् ।
यसोसँगै यादवको संघीय फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई तिहाईको शक्ति आर्जन गरेका छन् ।
प्रदेश २ मा पकड रहेको फोरमको सत्तारोहणसँगै मधेसी भावनाको प्रतिनिधित्व देखाएर सरकारले मैदानी भुभागका असन्तुष्टिलाई मन्थर गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।
उपेन्द्रले किन स्वास्थ्य मन्त्रालय रोजे ?
यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सर्नुको मुख्य कारण हो, यो मन्त्रालयको बजेटको आकार निकै ठूलो हुनु। शहरी विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी विभाग निकालेर छुट्टै मन्त्रालय नबनाइएको भए शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको आकार पनि ठूलै हुने थियो।
ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि खानेपानी विभागपनि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत थियो। आर्थिक बर्ष २०७५-०७७ को बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयका लागि झण्डै ३४ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ भने खानेपानी मन्त्रालयका लागि २४ करोड भन्दा बढी विनियोजित छ।
के देखिन्छ भने, प्रधानमन्त्री ओलीले शहरी विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर खानेपानी मन्त्रालय नबनाइदिएको भए यो आर्थिक बर्षमा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ५८ अर्ब भन्दा बढी हुने रहेछ। र, करिव ८४ अर्ब बजेट पाएको उर्जा मन्त्रालयपछि सबैभन्दा धेरै बजेट यही मन्त्रालयले पाउने रहेछ।
तर, ओलीले प्रचण्डलाई समेत जानकारी नदिई १३ फागुन साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट शहरी विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी विभागलाई झिके र छुट्टै खानेपानी मन्त्रालय बनाइदिए। ओलीको यो निर्णयपछि यादव क्रुद्ध भए / उनी सरकारमा नै गएनन्।
हुन त, ओली-प्रचण्डसँग ‘आवस्यकता अनुरुप संविधान संसोधन गर्न’ भन्ने बेहोराको दुई बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षरपछि सरकारमा सहभागी भएका हुन् यादव। तर, यादव कम्युनिष्ट सरकारमा सहभागी हुनुको प्रमुख कारण चाहिँ ओलीले जनाएको संविधान संसोधनमा सहमति होइन।
पार्टीले भोग्नु परिरहेको आर्थिक संकट, कार्यकर्ता व्यवस्थापनको समस्या नै यादव सरकारमा जानुको भित्री कारण हो। सरकारमा जाँदा पार्टीले भोग्नु परिरहेको आर्थिक संकट, कार्यकर्ता व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने यादवले सोचेका छन्।
Previousपचास प्रतिशत महिलामा पाठघेर मुखको क्यान्सर
Nextआफ्नै घरअगाडि फोहोर फाले तुरुन्त जरिवाना
भारतीय राजपत्रमै लिम्पियाधुरा नेपालको भएको उल्लेख
१२ मंसिर २०७६, बिहीबार ०३:३०
काठमाडौं महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम
१ जेष्ठ २०७४, सोमबार १४:४५
२९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०६:२७
यही महिनाभित्र नेपालमा ९ म्याग्निच्यूटको भूकम्प जाने चेतावनी
२१ श्रावण २०७३, शुक्रबार ०४:४९